Kabadhka birta ee biyuhu banaanka u yihiin Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha adeegga adeegga - Qiimaha Warshadda - SZ KMY
Hoyga > Alaabada > Sanduuqyo > Iskuduwaha Iskudarka Adeegyada > Bannaanka Kabadhka birta ee biyuhu ka baxaan ee Adeegga Xawaaraha
Kiosk kabadhkan xayeysiinta boostada wuxuu kordhiyaa ku-habboonaanta iyo wax-ku-oolnimada wax soo saarka warshadaha, xirmooyinka waa la soo qaadi karaa ka dib marka lacag la iska bixiyo.
Iyada oo dhisme qallafsan iyo naqshad aan biyuhu lahayn, sanduuqyada elektaroonigga ah ee dibadda ku soo kordhaya ayaa caan ka noqonaya adduunka. Shaqaalaha shirkadda Express ku kaydi baakadaha dukaankan, kuna wargeli kuwa wax helaya inay soo qaataan. Ka dib markay qaatayaashu gaadhaan dukaankan, waxay ku bixiyaan kharashka gudbinta iyada oo loo marayo kaarka bangiga ama lacag caddaan ah, ka dibna sanduuqa u dhigma ayaa furmi doona, oo qaatayaashu waxay ururinayaan guntinta.
Maaddaama kabadhkani la geeyay bannaanka, golaha kiosk-ka ayaa ka sii dhumuc weynaan doona inuu noqdo anti-kharribaad, iftiinka ugu sarreeya ee shaashadda ayaa la weyneyn doonaa si looga dhigo qorraxda mid la aqrin karo, naqshadeynta biyuhu waa la tixgelin doonaa, qaboojiyaha ayaa lagu dari karaa habeynta heerkulka.
Dukaankan waxaa lagu dabaqi karaa xafiisyada boostada, jidadka, bulshada, iwm.
Bannaanka ama bannaanka
Kiosk gudbinta alaabada iskeed ayaa noqota mid caan ka ah adduunka, si loo wanaajiyo waxtarka gaarsiinta, baakado kala duwan ayaa lagu keydin karaa sanduuqyada xirashada iyadoo lagu saleynayo cabirro kala duwan, kuwa wax qaata waxay ku qaadan karaan is-bixin.
Dejinta aasaasiga ah
PC warshadaha:taageerida Intel i3 ama wixii ka sareeya, kor u qaad codsiyada
Muuqaalka taabashada warshadaha / kormeerka:10.4â € ™ â € ™, 15â € ™ â € ™ 17â € ™ â € ™ ama ka sareeya, Antivanalism
Shaashadda taabashada:capacitive, SAW ama taabashada infrared, 15â ™ ™ â € ™, 17â € ™ â € ™, 19â € ™ â € ™ ama ka sareeya.
Kaarka Akhriste:EMV shaashadaysan oo matoor leh, IC, akhristaha kaarka RFID, akhristaha kaarka oo dhan-ka-ah
Suufka PIN:Pad sir ah oo sir ah oo loo yaqaan 'PCI encryption pad', oo leh daboolka anti-peep
Qaboojiyaha:xakamee heerkulka illaa xad go'an, in dhammaan qaybaha ay si caadi ah u shaqeyn karaan.
Astaanta OEM ama sanduuqa nalka
Midab ikhtiyaari ahâ € ”Powder dahaarka ku dahaaran
Waxyaabaha kale ee ikhtiyaariga ah:
Qaababka Xirmooyinka (GSM / GRMS)
KMY waxay leedahay macaamiil ka kala socota in ka badan 150 dal oo adduunka ah, sanad walba, waxaan soo saarnay tiro kumanaan ah oo kiroosyada lacag bixinta ah, kiishka tikidhada, boorsooyinka boostada, iwm.
Habka xirxirida hubso: duub xumbada + santuuq loo habeeyay
Si loogu adeegto suuqa adduunka, wax soo saarka KMY waxaa shahaado ka haysta CE, FCC, RoHS, IP65 oo biyuhu xireen, anti-vandalism IK07, iwm.
Sannad kasta, waxaan ka qayb geli jirnay bandhigyo sidii carwooyin looga soo bandhigi lahaa dalal kala duwan, sida CEBIT ee Jarmalka, CES ee USA, DIFC ee Imaaraadka.
1. Dukaan kasta miyaa la habeeyay?
Haa, waxaan u habeynnaa kiosk kasta oo ku saleysan arjiga macaamiisha iyo shuruudaha qeexida, ODM ama OEM.
2. KMY ma bixisaa softiweer software?
Maaddaama KMY ay tahay soo-saare, soo bandhig xalka qalabka oo dhammaystiran iyo SDK la xiriira, adoo aan siinin softiweerka kiosk, ogow fadlan.
3. Waa maxay waqtiga dhalmada ee muunadda iyo amarka jumlada?
Muunad ahaan, waxaan u baahanahay inaan qaabeyno, waqtiga dhalmaduna waa 30-45 maalmood oo shaqo ah;
Amarka jumlada ah, waqtiga dirista waxay ku saleysan tahay tirada dalabka dhabta ah.
Calaamadaha kulul: Bannaanka Kabadhalan Biraha Loogu Talo Galay Adeegga Xawaaraha, Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaasha, Warshad, Qiimo
Iskaa Wax u Darsiga Dukaanka Kiosk Payment Diover Kiosk
Taabashada Taabashada Shaashadda Is-Adeegga Xayeysiinta Boostada leh Locker
On Baska Customized Touch Screen bixinta Kiosk Taakulaynta Bangiga Kaarka Deynta
Custom On Baska Tigidhada Mashiinka Iibinta Mashiinka Lacag Siinta
Tikidhada Adeegga Iska Iibinta Kiosk